Shiinaha Hot iibiya maaskaro caafimaad oo la tuuri karo oo tayo sare leh oo ka timid soosaarayaasha iyo warshadleyda Shiinaha | Caafimaadka AKF
Iibinta kulul Maaskarada caafimaad ee la tuuri karo oo tayo sare leh oo ka timi warshad Shiinaha
1. Maaskarada qalliinka la tuuri karo waxay ka kooban tahay 3 lakab oo lakab dibedda ah oo aan tolmo lahayn, 98% lakab dhalaalaya iyo lakab gudaha oo aan tolmo wanaagsan lahayn oo leh lakab dusha sare ee hypoallergenic oo ka hortaga cuncunka maqaarka ama dhibaatooyinka xasaasiyadda. Badeecaddu waxay u hoggaansameysaa heerka EN14683 nooca II.
2.No cuncun lahayn oo si fudud loo neefsan karo, ayaa keenta waxtarka neefsashada oo leh cadaadis kaladuwan. Waxtarka sifaynta bakteeriyada sare.
3. Qalabka dhegta-loop waxaa laga sameeyaa wareega wareega ee bilaashka ah 'Lycra elastic' kaas oo ku dheereeya cabirka 1: 2 taasoo sahleysa in la xidho oo raaxo leh looga saaro.
Hore: Gacmo gashiyada la tuuro Nitrile Latex Nadiifinta Cuntada Gacmo gashiyada Gawaarida Nadiifinta Qoyska Universal Qoyska
Xiga: Iibinta kulul 3-lakabka faashadda wejiga maaskaro la tuuri karo ee maaskaro caafimaad
Hot iibinta 3-lakabka faashad wejiga maaskaro ...